Japanese Basic - MYSTERY ZILLION
Japanese Basic နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရန်။
ဖြေမယ့်သူက ဖြေဖို့စောင့်နေပါတယ်... မေးချင်သူများ မေးကြပါ။ သင်ခန်းစာနှစ်ခု ရေးပြီးပါပြီ။ မရှင်းလိုက်တာ၊ မသိလိုက်တာများရှိခဲ့ရင် အချိန်မရွေး မေးနိုင်ပါကြောင်း...။:65:
(ကျွန်တော်ဂျပန်ကားကြည့်တာ စာတန်းထိုးရင် တချို့စာလုံးကတရုတ်စာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူပြီး တချို့ကဘာမှမတူလို့ပါ)
First you must read http://edu.mysteryzillion.org
ဟောတော့ mzeduက နည်းပညာချည်းပဲလို့ ဘယ်သူပြောတုံး :O
ဂျစ်ဆီရေ.. MZ မရောက်တာ တော်တော်ကြာနေပြီနဲ့တူတယ်။ edu.mysteryzillion.org ကော ဝင်ကြည့်ရဲ့လား ကွယ်။ ဘာမှ မသိပဲ ဝင်ဆရာလုပ်ပြန်ပြီ။ နောက်မပြောခင် သေသေချာချာ ဖတ်သေချာမှ ရေး။ thread ကိုက edu ထဲမှာ။ edu က အကုန်သင်တယ်။ computer မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတောင် edu ပွဲလုပ်တုန်းက တက်ခဲ့ပေလို့ပဲ။ အဲတုန်းက မုန့်ပဲ ထိုင်စားနေလို့ဖြစ်မယ်။
လောလောဆယ်တော့ မေးစရာ မရှိသေးဘူး....
ဒါဆိုကျွန်တော်စမေးပြီ ကျွန်တော်သိသလောက် ဂျပန်စာမှာရေးနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆို ဘယ်နှစ်မျိုးလဲ? ဘယ်လိုကွာလဲသိချင်လို့ပါ? (ကျွန်တော်ဂျပန်ကားကြည့်တာ စာတန်းထိုးရင် တချို့စာလုံးကတရုတ်စာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူပြီး တချို့ကဘာမှမတူလို့ပါ) __________________ တကယ်သိချင်လို့ မေးတာလား ? ဘယ်လိုသဘောလဲတော့ မသိဘူး.....ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ အမေးရှိတော့ ဖြေပေးပါ့မယ်.......ညီလေး ပြောတဲ့ တရုတ်စာလုံးနဲ့ တူတယ်ဆိုတာ တရုတ်စာပါ ..ဂျပန်လို ခန်းဂျိီး လိ့ုခေါ်တယ် .....ဂျပန်မှာ ရုံးသုံးစာ က ခန်းဂျီးပါ....ခန်းဂျီးမသိရင် ဒါမှမဟုတ် ဂျပန်လိုရေရေလည်လည် မပြောနိုင်ရင် ဂျပန်မှာ အခက်အခဲအများကြီးတွေ့ ပါလိမ့်မယ်.....ဒါပေမယ့် Beginner တယောက်အနေနဲ့ ဒီ MZ edu က Basic က စလေ့လာပါ.....ဘယ်ဂျပန်သင်တန်းဖြစ်ဖြစ် ခန်းဂျီး က စမသင်ပါဘူး .....လောမကြီးရဘူးလေ..... ခန်းဂျီး ရာဇ၀င်နဲ့ knowledge ကို သိချင်ရင်တော့ ပြောပြပါ့မယ်......
တကယ်သိချင်လို့ မေးတာလား ? ဘယ်လိုသဘောလဲတော့ မသိဘူး.....ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ အမေးရှိတော့ ဖြေပေးပါ့မယ်.......ညီလေး ပြောတဲ့ တရုတ်စာလုံးနဲ့ တူတယ်ဆိုတာ တရုတ်စာပါ ..ဂျပန်လို ခန်းဂျိီး လိ့ုခေါ်တယ် .....ဂျပန်မှာ ရုံးသုံးစာ က ခန်းဂျီးပါ....ခန်းဂျီးမသိရင် ဒါမှမဟုတ် ဂျပန်လိုရေရေလည်လည် မပြောနိုင်ရင် ဂျပန်မှာ အခက်အခဲအများကြီးတွေ့ ပါလိမ့်မယ်.....ဒါပေမယ့် Beginner တယောက်အနေနဲ့ ဒီ MZ edu က Basic က စလေ့လာပါ.....ဘယ်ဂျပန်သင်တန်းဖြစ်ဖြစ် ခန်းဂျီး က စမသင်ပါဘူး .....လောမကြီးရဘူးလေ..... ခန်းဂျီး ရာဇ၀င်နဲ့ knowledge ကို သိချင်ရင်တော့ ပြောပြပါ့မယ်......
ကျွန်တော်လည်း မကြီးမငယ်နဲ့ edu မှာပြန်ဖတ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ ပြန်ပြီးအရေးကျင့်နေပါတယ်။ ဟိရဂနနဲ့ ခတဂန အခုထက်ထိမကွဲဘူး ရေးရင်းရောသွားတယ် ဖတ်ရင်တော့ ဘယ်စာလုံးမှမမှတ်မိဘူး အကုန်ရောတော့တာပဲ ဘယ်လိုကျက်ရမလဲဟင် ရေးကျက်တာပဲခင်ဗျ တစ်တန်းပြီးတစ်တန်း ေ၇းကျက်လိုက်တာ သုံးတန်းလေးတန်းလောက်အထိတော့ ဟုတ်နေတာပဲ ကျော်သွားရင်မရတော့ဘူး ရောကုန်တာပဲ။ တပည့်ရဲ့ ရာဇဝင်ကို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် MUFL မှာမနက်ခင်းတန်းတက်တာ Semester2ခုမှာ ဘယ်ဘာသာမှန်းမမှတ်မိဘူး ၁ ဘာသာစီကျလို့ အမြဲပြန်ဖြေရပါတယ် ကျန်တဲ့ဘာသာတွေလည်း မော်ရေးရှင်းတွေကြည့်ပါ။ အဂလိုကို အခြေခံကတော့ကောင်းပါတယ် ဂျပန်စာဆို အိချိကနေ ဂေါ့အထိ ရွတ်တတ်တယ် အဲဒါတောင် သင်တန်းမှာ ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းရင်း တိုင်ပင်ရွတ်ရလို့ရတာ ဟိဟိ ရေးတာကတော့ အိချိ နိ စန်း ဒါပဲအလွတ်ရေးတတ်တယ်။ နောက်သင်ခန်းစာတွေကျရင် မေးမယ်နော် အခုထိတော့ရပါသေးတယ်။ ကကြီးခခွေးကျက်နေပါတယ်။
ဟိရဂနနဲ့ ခတဂန အခုထက်ထိမကွဲဘူး ရေးရင်းရောသွားတယ် ဖတ်ရင်တော့ ဘယ်စာလုံးမှမမှတ်မိဘူး အကုန်ရောတော့တာပဲ ဘယ်လိုကျက်ရမလဲဟင် ရေးကျက်တာပဲခင်ဗျ တစ်တန်းပြီးတစ်တန်း ေ၇းကျက်လိုက်တာ သုံးတန်းလေးတန်းလောက်အထိတော့ ဟုတ်နေတာပဲ ကျော်သွားရင်မရတော့ဘူး ရောကုန်တာပဲ။
အဲဒါကလေ hiraganaကို ဘယ်နေရာကဖောက်မေးမေး ရေးတတ်ပြီဆိုမှ katakanaကိုကူးတာကောင်းတယ်။ ပြိုင်တူကျင့်ရင်တော ရောမှာပဲ။ နေ့အိပ်မက်ပထမနှစ်တုန်းကတော့ မျဉ်းပျော့ရင်(၀ုိင်းရင်)hiragana၊ မျဉ်းမာရင်(လေးထောင့်ကျရင်) katakanaလို့ မှတ်ထားတာပဲ။
ကျွန်တော် ဂျပန်စာ စသင်တုန်းကတော့ Game နဲ့ ကျက်ခဲ့တာပါ.....အဲဒီ Hiragana Katakana ကျက်တဲ့ Game လေး ရှာကြည့်ပါလား........ကျွန်တော့် Game Software မြန်မာ မှာ ကျန်ခဲ့လို့ upload မတင်ပေးနိုင်တာပါ
sithu19 wrote: »
အစမ်းတော့ ရေးကြည့်ထားတယ်ခင်ဗျ စစ်ပေးပါဦး ရမ်းရေးထားတယ်နော် တစ်ချို့စာလုံးတွေက ဝါကျဘယ်လိုဆောက်ရမလဲ စဉ်းစားလို့မရဘူးဗျ။ နာမည်တွေကိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးထားတယ်နော် ခတကနနဲ့ ပေါင်းတတ်သေးဘူး ဟိရဂနတွေလည်း romaji လိုရိုက်လိုက်လို့ ထွက်လာတာနော် အခုတော့ကြိုးစားပြီး မှတ်မိအောင်စာလုံးတွေ ကျက်နေပါတယ်။
Nikoye san wa hongaku desu
Daydream san wa sensei desu
jinsei wa kimoti desu
isha wa hito desu
NLB wa yuubinkyoku desu
romajiနဲ့ရေးတာတော့ အကုန်မှန်တယ်.. ဂျပန်စာတွေကလား.. ဟီး.. နေ့အိပ်မက်မှာ ဖောင့်မရှိဘူးရယ်.... ပြောမယ်ဆိုလည်း ခံရမှာပါပဲ.... :2: ဂျပန်စာသင်နေပြီး ဖောင့်တောင်မရှိဘူးလားဆိုပြီး ... နက်ဖြန်နဲ့ သန်ဘက်ခါ တစ်ရက်ရက်တော့ ရအောင်သွင်းမယ် စဉ်းစားထားပါတယ်..